कठै बिचरा!! यी नर्स जसले ५ हजार भन्दा बढि सु’त्केरी गराइन् तर आफै सुत्केरी हुँदा सं’सार छाडिन्,,,,हार्दिक श्रद्धाञ्जली !!
३८ वर्षीया नर्स ज्योति गवली भारतको म’हाराष्ट्र राज्य, हिंगो’ली को सिभिल अ’स्पताल, कार्यरत थिइन् । वितग ५ वर्षदेखि त्यहाँको प्रसूती वार्डमा कार्यरत नर्स ज्यो’तिले त्यसअघि विभिन्न स्वास्थ्य सं’स्थामा काम गरेका थिइन्।
५ वर्ष उक्त अ’स्पतालको प्रसूति वार्डमा काम गर्दा उनले ५ हजार भन्दा बढी महिलालाई सुरक्षित सु’त्केरी गराएको उनका सहक’र्मीले बताएका छन् । जब उनी आफैँ सुत्केरी भइन् । उनले यो सं’सारबाट विदा लिइन्।
ज्योतिले २ नोभेम्बरमा आफूकार्यरत हिं’गोली सिभिल अ’स्पतालमै दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् । श’ल्यक्रि’यामार्फत उनले सन्तान जन्माएकी थिइन् । उनी सुत्केरी हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि ड्यू’टीमा आएकी थिइन् ।
सु’त्केरी भएपछि उनको निरन्तर रक्त’श्राव भयो । अनेक प्रयास गर्दा पनि उनको रक्त’श्राव रोकिएन । त्यसपछि उनलाई हिं’गोली अ’स्पतालबाट अर्काे एक निजी अ’स्पतालमा लगियो । त्यहाँ लगेपछि चि’कित्सकहरुको प्रयासबाट रक्तश्रा’व त रोकियो तर उनलाई नि’मोनिया देखियो ।
स्वास्थ्य निरन्तर विग्रँदै गएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो । उनलाई औरंगावाद अ’स्पतालमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । तर औरंगावाद अ’स्पताल नलैजाँदै दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएको १२ दिनपछि १४ नोभेम्बरमा उनले संसार छाडिन् । हिं’गोली जिल्लाका स्वास्थ्य अधि’कारीहरुले ज्योतिको मृ’त्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।
उनी निकै मिलनसार र मेहनती रहेको उनका स’हकर्मीहरुले बताएका छन् । उनको सेवा लिने सबैले उनको प्र’शंसा गर्ने गर्थे ।
– ताजाखबर बाट
२०७८ मंसिर ६, सोमबार प्रकाशित0Minutes 111 Views